မြစ်ဆုံနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သူကြီးကိုပြောပြချင်တာလေးတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြစ်ဆုံနှင့်ပါတ်သက်ပြီး သူကြီးကိုပြောပြချင်တာလေးတွေ
Posted by စဆရ ကြီး on Oct 2, 2011 in Creative Writing, Critic, Think Different | 29 comments
http://myanmargazette.net/70683/uncategorized-other/copypaste မှာ သူကြီးမန့်ထားတာ သဘောမကျလို့ ဒီ Post ကို ရေးလိုက်တာလဲဖြစ်သလို ကျန်တဲ့သူတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မြင်ချင်လို့ ရေးလိုက်တာပါ။
ဒီတစ်ခါတော့ သူကြီးတွေးတာကို မူမမှန်ဘူးထင်တဲ့အတွက် ကန့်ကွက်တယ်ဗျာ
ပြောရမယ်ဆိုရင် အရှည်ကြီးပဲ.. သူကြီးက မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး( ကျွန်တော်ပါ အပါအ၀င် )ကန့်ကွက်နေကြတဲ့ မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကိစ္စကို ဖျက်သိမ်းလိုက်တာ သိပ်ကျေနပ်ပုံမရဘူးထင်တယ်။ သူပြောထားတာ ဒီလိုပါ
ဆိုတော့ကာ ပြောချင်တာတွေ တစ်ခုချင်းစီ ပြောပြမယ်ဗျာ.. ပညာတတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ရော၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေခဲ့တာ သူကြီးထက်ပိုကြာခဲ့ပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက် လက်ရှိမြန်မာပြည်အခြေအနေတွေနဲ့ပဲပြောမယ်။
ကျွန်တော်ဟာ မွေးကတည်းက ၀န်ထမ်းသားသမီးဘ၀နဲ့ကြီးပြင်းလာရတဲ့အတွက် လျှပ်စစ်မီးပျက်တယ်ဆိုတာ အတော်လေးကို ကြုံခဲတဲ့ကိစ္စလို့ပြောရမယ်.. ပြီးတော့ လစဉ်မီတာခလဲ မကုန်ခဲ့ဘဲ ညအိပ်ရင်တောင် မီးပျက်နေရင် မအိပ်တတ်တော့သလိုတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်.. မိဘတွေ ပင်စင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အရပ်သားဘ၀ကို ပြန်ရောက်လာပေမယ့် အလုပ်ကလဲ အစိုးရအလုပ် ဖြစ်နေပြန်သေးတော့ မီးပျက်တာ မကြုံဖူးဘူး.. နောက်ဆုံး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပါ ၀န်ထမ်းအလုပ်က ထွက်လိုက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အစွန်အဖျားက မြို့နယ်လေးတစ်ခုမှာနေတော့မှ မီးက ပျက်လိုက်၊ မလာလိုက်နဲ့ဘ၀မှာနေရတော့ တော်တော်လေးကို ကိုးလိုးကန့်လန့်နိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။ နောက်တော့လဲ ငွေလေးစုပြီး မီးအားမြှင့်စက်လေးဝယ်၊ အင်ဗာတာလေးဝယ်၊ ၅၀ မီး (ခုတော့ ၁၅၀ ဖြစ်နေပြီ)လေးနဲ့ ညဆို အိမ်လေး လင်းလင်းထိန်ထိန်နဲ့ နေနိုင်ခဲ့တယ်။
ဆိုတော့ကာ… ပြောချင်တာကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အမှောင်ထဲမှာ နေဖို့ ကျင့်သားရအောင် လေ့ကျင့်ခိုင်းစရာ မလိုတော့ပါဘူး.. ညဘက် ၈နာရီကျော်၊ ၉ နာရီလောက်မှာ ဆင်ခြေဖုံးမြို့နယ်တွေမှာ လမ်းမီးရောင်မရှိတဲ့ အမှောင်ထဲမှာ ပြန်လာလို့ အဓမ္မပြုကျင့်တာတွေလဲ မကြားမိတော့ပါဘူး.. အရင်တုန်းက များပြားခဲ့ပေမယ့် ခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလဲ ကိုယ့်နှမ၊ သားချင်း စာနာတတ်နေပါပြီ.. သိပ်ဆိုးတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်လဲ မိဘတွေ၊ မောင်နှမတွေ သူတို့အစ်မ၊ ညီမ၊ သမီးတွေပြန်လာမှာကို လည်ပင်းတမျှော်မျှော်နဲ့စောင့်စားနေကြရင်း စကားဖောင်ဖွဲ့နေကြတာလဲ မှတ်တိုင်တွေမှာဆို ပြည့်နှက်နေတာ ည၉း၀၀ ကျော်ရင် သွားကြည့်ပါ၊ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သူကြီးကတော့ မီးမပျက်တဲ့ မြို့တော်ကြီးမှာနေနေရတော့ မီးပျက်ရင် နေဖို့တော်တော်လေးခက်တော့ ကိုယ်နဲ့နှိုင်းပြောတယ်ပဲထင်ပါတယ်.. ဒီ ဆိုက်ဟာလဲ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်၊ အတွေးအမြင်တွေကို လွတ်လပ်စွာချရေးပြနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သလို သတင်းအချက်အလက်တွေ ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ မီဒီယာတစ်ခုလို့လဲ ကျွန်တော်မြင်မိတယ်.. အဲဒီထဲမှာ ဒီဆိုက်ကို ထိန်းကြောင်းပဲ့ကိုင်ပေးနေတဲ့ သူကြီးမှာ အများကြီးတာဝန်ရှိတယ်၊ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာ ကမ္ဘာသိ မသိမြင်နိုင်ကြသေးဘူး၊ လမ်းရိုးကြီးက ဖောက်မထွက်နိုင်ကြသေးဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ ဒါတွေဟာ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိလဲဆိုတော့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အစိုးရမှာ တာဝန်အရှိဆုံးပဲ။ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဥာဏ်တွေ၊ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့ ပညာရေးကောင်းကောင်းလဲ မလုပ်၊ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ နိုင်ငံသားတွေ များပြားလာအောင်လဲ စောင့်ရှောက်ပေးမယ့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလဲမပေး၊ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ၊ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွေ မြင့်တက်လာစေမယ့် စီးပွားရေး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလဲမရှိနဲ့ ပြောရရင်တော့ အများကြီးပဲ.. သူကြီးကတော့ အဲဒါတွေအားလုံးရနေတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့၊ နေထိုင်နေတဲ့သူတွေဘ၀ကို စာနာစေလိုတယ်.. သူတို့မှာ ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်လဲမရှိကြဘူး၊ ဘာမှလဲ ကျိုးစားခွင့်မရကြဘူး၊ အပျော်အပါး မီဒီယာတွေလောက်သာ သူတို့ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လက်လှမ်းမှီနေတာရယ်၊ အစိုးရရဲ့ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် ထဲထဲဝင်ဝင် အသုံးချထားတာတွေရယ်ကြောင့် အတွေးတိမ်တိမ်၊ ဘ၀ပေါ့ပေါ့လေးတွေကို ဖြတ်သန်းနေကြပြီး အနာဂါတ်မဲ့နေကြတယ်လို့ မြင်မိတယ်။
လျှပ်စစ်စွမ်းအားဆိုတာ မိုးပေါ်က မိုးနတ်မင်းကြီးက မိုးကြိုးတွေပြစ်ချပြီးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းနားလည်ကြပါတယ်.. သို့သော်လည်းပေါ့လေ.. ကိုယ့်ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုပဲကြည့်ပါ.. ပြစရာကလဲ အကောင်းစားကြီးပဲရှိတော့ စင်္ကာပူကိုပဲ ညွှန်းဆိုပြရတော့မှာပေါ့.. သူတို့တွေနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံရှိသလား? မရှိဘူးလို့တော့သိထားတယ်။ ဒီတော့ သူတို့နိုင်ငံကြီးကို မီးတွေလင်းထိန်နေအောင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ? မလေးရှားကနေ အစိုးရက ၀ယ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးတယ်။ ဒီတော့ သူကြီးကပြောဦးမယ်.. ၀ယ်နိုင်မှာပေါ့ သူတို့နိုင်ငံက ချမ်းသာတာကိုးလို့၊ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာလဲ သိပ်ချမ်းသာကြောင်း ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေက သူတို့ အဘိုး၊ အဘွားတွေက ပြောပြကြောင်းကြားရလို့ သိပ်ဝမ်းသာတာပဲ၊ ကျွန်တော့်ကိုလဲ မေးကြတယ်၊ မင်းတို့နိုင်ငံက ချမ်းသာရဲ့သားနဲ့ ဘာလို့ဒီမှာ အလုပ်လာလုပ်နေလဲလို့ မေးလာကြရင်တော့ ခပ်ယဲ့ယဲ့လေးပဲ ပြုံးပြနိုင်တော့တယ်.. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ မဆင်းရဲကြောင်း သူကြီးလဲ အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ.. ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ သယံဇာတတွေ ရှိသမျှ အကုန်ထုတ်ရောင်းစားနေနိုင်သေးတာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပဲဖြစ်ကြောင်းသိမှာပေါ့.. ခက်တာက ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ပဲ ထုတ်နိုင်သေးတယ်.. ကုန်ချောထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်၊ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ကို စင်္ကာပူလို ပွဲစားနိုင်ငံတွေကနေတစ်ဆင့် မတင်ပို့ရရင်၊ ဒေသတွင်း ဈေးခပ်နှိမ်နှိမ်ပဲပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကို မရောင်းစားနေရရင် ခုလို ကမ္ဘာနဲ့ချီပြီး သယံဇာတ အရင်းအမြစ်တွေရှားပါးနေချိန်၊ ဈေးကောင်းတွေရနေချိန်မှာ ရောင်းစားပြီးငွေရှာထား၊ အနာဂါတ်မှာ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ဘယ်လိုပဲ့ကိုင် မောင်းနှင်သွားမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေချသွားရင် အဲဒီလိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ အရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးတွေက ရက်ရက်ရောရာ ကူညီကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ပေါက်ဖော်ကြီးတွေလိုမဟုတ်တဲ့ မျက်နှာနီနိုင်ငံများကို ဆိုလိုပါတယ်။
ခုဆို ဒူဘိုင်းအကြောင်းကြားရတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့လေ၊ ဒီနိုင်ငံက အခုအချိန်မှာ ရေနံနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာနေသလို Tourism တွေ ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လဲ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ လျှော့ချ၊ ဆွဲဆောင်မှုတွေ အများကြီးလုပ်နေတယ်။ ဒါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နောင်လာမယ့် အနှစ်ငါးဆယ်လောက်အတွင်းမှာ ဒီနိုင်ငံမှာ ရေနံထွက်ရှိမှု လျော့ကျသွားမှာဖြစ်သလို မထုတ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့ထိဖြစ်သွားမယ်လို့ ကြားထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့နိုင်ငံကို အနာဂါတ်မှာ ဘယ်စီးပွားရေးနဲ့ ရပ်တည်သွားရမလဲတွေးပြီး ခုကတည်းက ကြိုကြိုတင်တင် အစီအစဉ်တွေဆွဲနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုတော့ကာ လိုရင်းကို ဆက်ရမယ်ဆိုရင် အရာရာချုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အစိုးရအဆက်ဆက်လက်အောက်မှာ အနှစ် ၆၀ကျော်လောက် နေထိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ခုမျိုးဆက်သစ်တစ်ခုမှာ စုပေါင်းညီညာ အောင်ကြောင်းဖြာခဲ့တဲ့ အောင်ပွဲတစ်ခုကို အားပေးသင့်ပါတယ်၊ ဖေးမလက်တွဲခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။ လမ်းညွှန်ပြသပေးသင့်ပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ အမှောင်ထဲမှာ အချိန်အကြာကြီးနေလာရတော့ ခုလို အလင်းရောင်လေး သဲ့သဲ့မြင်လာရတဲ့အချိန်မှာ သူတို့တွေ မျက်စိကြိမ်းနေမှာပေါ့။
ခဏလောက်ပြန်မှိတ်ပြီးမှ တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ဖွင့်ခိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့
(မြန်မာပြည်သူ/ပြည်သားတို့၏ အောင်ပွဲတစ်ခုကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှ ကြိုဆိုအားပေးလျက်..)
ပြောရရင်.. ကလင်တန်ရဲ့လက်ထက် ဒုသမ္မတ အယ်လ်ဂိုးကစလို့… An Inconvenient Truth (2006) – ဒေါ့ကျုမန်ထရီ ရိုက်ပြီး.. သူ့ကိုပါနိုဗယ်လ်ဆုပေးပြီနောက်ပိုင်း.. ကမ္ဘာလူသားတွေ.. ရှယ်…သတိထားမိလာကြတာပေါ့..။
အဲဒီအချိန်မှာ.. ကမ္ဘာပေါ်က ဖွံ့ ဖြိုးပြီး..ဖွံ့့ဖြိုးစနိုင်ငံတွေရဲ့..မြစ်ကြီးတွေအားလုံးလိုလို.. ရေကာတာတွေလုပ်ပြီးနေပြီ..။
တိုင်းပြည်တွေက.. ငွေကြေးအားဖြင့် အထိုက်အလျှောက်ချမ်းသာကုန်ကြပြီ..။
ဂေဟစံနစ်ကို.. အဓိက ဖျက်စီးသူကြီးများဖြစ်တဲ့.. အမေရိကားအပါအ၀င်.. ဥရောပနိုင်ငံတွေက.. ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီ..။
အဲဒီအပေါ်မှာ.. လူတွေ… စူပါပါဝါတွေ ဘယ်လိုနိုင်ငံရေးကစားသလည်း.. သေသေချာချာတွေးနိုင်ဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်..။
ဒီရွာသားတွေ.. အတွေးအခေါ်တွေ..အားလုံး ရှေ့မှာပြေးနေကြစေချင်တယ်..။
ဒီတော့ .. အမြဲအစလေးတွေဆွဲထုတ်ပေးလိုရင်းပါပဲ..။
အဲဒီလို ငြင်းခုန်ရင်းနဲ့.. အရောင်တွေတက်လာမယ်ထင်တာပဲ..။
List of countries by carbon dioxide emissions (2008)
China = 23.33 %
USA = 18.11 %
EU = 14.04 %
India = 5.78 %
Russia = 5.67 %
Japan = 4.01 %
Australia = 1.32 %
Thailand = 0.95 %
Myanmar = 0.04 %
List of countries by carbon dioxide emissions per capita (2008)
( metric tons of CO2 per capita (CDIAC) )
Qatar = 53.5
United Arab Emirates = 34.6
Bahrain = 29
United States = 17.5
China = 5.3
Myanmar = 0.3
သဂျီးကြည့်ရတာ ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲတွေ ဘာတွေ ၀ါသနာပါပုံပေါက်တယ်။ တနည်းအားဖြင့်လည်း ရွာသူ/ရွာသားတွေကို အငြင်းဖက်ကနေပြီး တွန်းပို့ပေးနေပုံပဲ။
I just rewrite my comments in my last post.
But, I only want to preserve “ မြစ်ဆုံ”, not other Dams’ areas.
Don’t forget, your country is very very very poor.
So, you cannot getalot of good things.
To becomeadeveloped nation, you have to sacrifice some things.
Environment & Green is really good to heard,
But, difficult to do & it is extremely costly.
Even, Australia is not rich enough to preserve its environment.
We realize we need power to become developed country.But myit sone project is for for us at all.Though Chinese government is hungry in electricity power to be richer but they dont built in their country.Our resourses such as teak,gems,natural gas…etc are bought/robbed by them using veto power in UN.Eventhough they become rich and super power,there is no dignity in regionally and globally.
Secondly,myit sone area will be flooded with chinese people and years and years later,it will be treatened to our national security and unity.
If we really need power developement,we should look for other sourses.Our resoures should be 100% for us.Not for them.
Bros and Sis ….Pls be aware of chinese is evading socially,economically…..to our country.
“”အဲဒီအချိန်မှာ.. ကမ္ဘာပေါ်က ဖွံ့ ဖြိုးပြီး..ဖွံ့့ဖြိုးစနိုင်ငံတွေရဲ့..မြစ်ကြီးတွေအားလုံးလိုလို.. ရေကာတာတွေလုပ်ပြီးနေပြီ..။
ဂေဟစံနစ်ကို.. အဓိက ဖျက်စီးသူကြီးများဖြစ်တဲ့.. အမေရိကားအပါအ၀င်.. ဥရောပနိုင်ငံတွေက.. ဖွံ့ ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေတောင် ဖြစ်နေကြပြီ..။””
သူကြီးပြောတဲ့အချက်ဟာ အတော်မှန်ပါတယ်။ သူတို့တွေက အရင်ဦး အောင်လုပ်ပြီးတော့မှ
ဖွံ့ဖြိုးစနိုင်ငံတွေကို ဘာမလုပ်နဲ့ ကမ္ဘာကြီးဘာဖြစ်လာပြီ၊ ညာဖြစ်လာပြီပြောနေကြတာပါ။
နယူကလီးယား ကိစ္စနဲ့ ကစက်ရုံတွေက ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုကိစ္စတွေလည်းဒီလိုပဲ ၊ထပ်လုပ်မဲ့နိုင်ငံတွေကို မလုပ်ဖို့ အပြင်းအထန်လိုက်နှောက်ယှက်ကြတယ်။
သူတို့ဆီက ဘယ်လောက်ပြန်လျှော့ပေးနိုင်လမဲဆို တော့ တုပ်တုပ်မှမလှုပ်ဘူး။
သူတို့က အကျိုးအပစ်ကိုသိသွားလို့ သတိပေးတယ်ဆိုရင် သူတို့လဲမလျှော့သင့်ဘူးလား။
ဒီမြစ်ဆုံ ရဲ့အ န္တရာယ်ဟာ တကယ် ဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ပညာ၇ှင်အများပြောရင်တော့ဆက်မလုပ်သင့်ပါဘူး။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖွံ့ဖြိုးရေးကို လုပ်တာတော့ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဗျာ။
အကျိုးနဲ့အပစ်ကို သေချာတွက်ချက်ပြနိုင်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့ အကြံကိုတော့ ယူရမှာပေါ့။
” သူတို့ဆီက ဘယ်လောက်ပြန်လျှော့ပေးနိုင်မလမဲဆို တော့ တုပ်တုပ်မှမလှုပ်ဘူး ”
Kindly learn, the main Environmental issues ;
World Carbon Emission,
Carbon/Emission Trading Scheme &
Finally “Kyoto Protocol”
( Further more, the status & responsibility of China & America
in this Kyoto Protocol & Why American didn’t sign “Kyoto Protocol” )
Those are tragedy of World’s Health & it is current.
FYI, every household in Australia indirectly paid Carbon Tax 900 $/year.
If somebody wants to learn about it,
I can make one post.
နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အားယူတဲ့နေရာမှာ စွမ်းအင်သုံးစွဲနိုင်မှုက အင်မတန်အရေးပါမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်…
အဲဒိအတွက် ကျွန်တော်တို့စွမ်းအင်ရနိုင်သမျှအရင်းအမြစ်တွေကနေ ထုပ်ယူသုံးစွဲကြရမှာလဲသေချာပါတယ်…
အဲဒိအတွက်လဲ ကျွန်တော်တို့စတေးသင့်တာတွေ စတေးရမှာပါပဲ… တစ်နိုင်ငံလုံးကောင်းစားဖို့ အတွက်ဆိုတော့.. တန်တယ်လို့ လဲထင်ပါတယ်…။ ။
သို့ သော်… အခုမြစ်ဆုံကိစ္စကို ကျွန်တော်လုံးဝကန့် ကွက်ပါတယ်.. အဓိကကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းက
မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်က ၁၀ % တရုတ်နဲ့ ကြားပွဲစားက ၉၀%..(နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်)… ကန့်ကွက်ရတဲ့ အခြားအခြားသောအကြောင်းရင်းတွေလဲရှိပါတယ်…သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်.. ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ side effects တွေအတွက် စသည်ဖြင့်….
နိုင်ငံတိုးတက်ကောင်းစားဖို့ .. စတေးသင့်တာ စတေးကြမယ်ဆိုပါတော့.. အခုကိစ္စကရော.. စတေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လောက်များ.. အကျိုးကျေးဇူးရနိုင်ပါသလဲ…
နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လေးရပ်ထဲက… ပြည်တွင်းပြည်ပကနေ အတတ်ပညာနဲ့အရင်းအနှီးတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးနိုင်ငံတိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို ယုံကြည်ပါတယ်…. သို့ သော် အိမ်နီးချင်းအမည်ခံပြီး တင်တင်စီးစီး ဂုတ်သွေးစုတ်နေတာကိုလဲ မခံလိုပါ… ကင်ဆာလိုအတွင်းကနေ တိတ်တဆ်ိတ် လှိုက်စားပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး အခွံချည်းပဲကျန်နေခဲ့ရမယ့်အဖြစ်မျိုး ကိုလဲမမြင်လိုပါ…
လုပ်တဲ့လူတွေအပြစ်မဟုတ်ဘူး.. လုပ်ခွင့်ပေးနေတဲ့လူတွေအပြစ်ရယ်လို့ လဲ… တစ်ဖက်ထဲကိုပဲ အပြစ်မတင်လိုပါ… လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေမရရအောင် လုပ်ခွင့်မပေးပေးအောင် လုပ်နေတဲ့အိမ်နီးချင်းကိုလဲ ထိုက်သင့်သလောက်တော့ အပြစ်ပုံချချင်သည်…
မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ဖို့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံတွင်တာဝန်မရှိပါ… ထို့ အတူ ဆုပ်ယုတ်စေဖို့ လုပ်နေကြသည်ဟုလဲ မစွပ်စွဲပါ… ကိုယ့်စီးပွားသူ့စီးပွားရှာနေကြသည်ကို နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်….. သို့ သော် နိုင်ငံအချင်းအချင်းအနေနှင့်မကြည့်ပဲ လူအချင်းချင်းအနေဖြင့်ကြည့်လျှင်… “ကိုယ်ချင်းစာတရား” ဆိုသည်မှာ လူမျိုးတိုင်းအတွက်လူအပ်တယ်…လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ပါတယ်…
ပထမဆုံးပြောချင်တာက ဒါဟာ အောင်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး။
အောင်ပွဲ ရတယ်ဆိုတာ ရန်ဘက် ၂ ဘက်ကြားမှာသာသုံးသင့်တာပါ။
ဒါက သားသမီးတွေက သဘောမတူလို့ ဖခင်လုပ်သူက လိုက်လျောတာမျိုးပါ။
ပြည်သူတွေကသဘောမတူလို့ ပြည်သူ့အစိုးရ က တာဝန်ယူပေးတာပါ။
နောက်တချက်က comment တခုမှာလို ဘယ်နိုင်ငံက ပတ်ဝန်းကျင်ကို scrafice လုပ်ပြီး စွမ်းအင် ထုတ်ထုတ်
အထူးသဖြင့်နိုင်ငံရဲ့အဓိက်မြစ်ကြွးီကို(တခြားမြစ်လေးတွေဆို ထားပါတော့)—–အကျိုးအမြတ်အများဆုံး——- နိုင်ငံကမရပဲ အပျက်အစီးမခံသင့်ပါ။
အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်သေးပဲ သူများနိုင်ငံအကျိုး အတွက်လုပ်မပေးနိုင်ပါ။ဒါနဲ့လဲ မချမ်းသာ နိုင်ပါဘူး။
နောင်ရေရှည်ကိုမှန်းရင်လဲ DAM ကိုအပြီးလွှဲတဲ့အခါ စက်တွေက သုံးမရတော့မှာအသေအချာပဲ။
တရုတ်ပြည်မကတော့… စ စကားပြောလာပါပြီ..။
ကျုပ်ကတော့.. လျှော်ရမဲ့ငွေနဲ့.. အကြွေးတွေနဲ့.. မြန်မာတွေအသားကျနေပြီဖြစ်တဲ့.. သုံးနေတဲ့.. တရုတ်ဖြစ်ပစ္စည်းတွေ..ဆေးဝါးတွေ…ကြည့်ပြီး.. နည်းနည်းတော့..အတွေးနက်နေမိတယ်..။
BEIJING: Beijing has urged Myanmar to protect the rights of Chinese companies after the government halted construction ofa$3.6 billion China-backed mega dam following public opposition to the project.
Myanmar President Thein Sein on Friday ordered work on the Myitsone Dam on the Irrawaddy River to stop —adecision hailed by the United States asasign the military-backed leadership was listening to its people.
Beijing and the Myanmar government haveaclose relationship and the comments arearare public display of discord between them.
Friday’s announcement marked an unexpected U-turn by the Myanmar regime.
Local media had quoted the minister for electric power as saying earlier in September that construction of the dam would go ahead despite public concerns.
ကျွန်မ ဥပဒေတွေ ဘာတွေတော့ နားမလည်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဟာ အစိုးရအဖွဲ့ ပြောင်းတာနဲ့ သူတို့ ရဲ့ Policies မူဝါဒတွေ ပြောင်းကြတာ ပါဘဲ။
ခလေးကစားသလို တော့ အရင်လူတွေလုပ်တာ ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူး လို့ မျက်နှာလွဲ ခဲပြစ် မလုပ်သင့် ပေမဲ့ မကောင်းတဲ့ တွေ၊ လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို လဲ ဆက်ယူစရာမလို လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် တော့ နှစ်ဖက်လုံး အတွက် Fair ဖြစ်တဲ့ Agreement ရှိနိုင်မှာပါ။
မြန်မာပြည် က တစ်ချို့တစ်ဝက် လျော်သင့်လဲလျော်ရမှာ မဟုတ်လား။
အနာဂါတ်မှာ ဖြစ်လာမဲ့ မကောင်းကျိုးတွေ နဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ဒါဟာ အသေးအဖွဲ နေမှာပါ။
ရေရှည် မှာ ကျွန်မတို့ အားလုံး အေးအတူပူအမျှ စည်းစည်းလုံးလုံး အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရင် ဒီလောက်လျော်ကြေး ဟာ ပြောလောက်မယ်မထင်ပါဘူး။
တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လဲ ပညာရှိမယ် ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ကောင်းလာစေမဲ့ အစိုးရကို ပံ့ပိုးသင့်ပါမယ်။
ဒါမှ နှစ်နိုင်ငံ ရေရှည်ချစ်ကြည်ရေး ရပါမယ်။
သူတို့က အသစ်ပြောင်းလဲမှုကို မကြိုက်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က ယနေ့ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး ဟာ အရင်လိုမဟုတ်ဘဲပြောင်းနေပြီး လူထုဆန္ဒကို အလေးထားနေရပြီ ဆိုတာ တရုတ်နိုင်ငံ လဲသိပါမယ်။
နိုင်ငံရေး ဟာ ဒီလောက်လွယ်မယ်တော့ မထင်ပေမဲ့ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ပြီး အဆိုးဆုံးအတွက်လဲပြင်ဆင်ထားရပါမယ်။
အထက်က ပြောကြသလို ဘဲ ကျွန်မတို့ အားလုံးစည်းလုံးဖို့သာလိုပါမယ်။
အနည်းဆုံးတော့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး တော့ရမှာပါ။
ကျွန်မ Day Dream တော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူး။
Dear Khin Latt,
” လျော်သင့်လဲလျော်ရမှာ မဟုတ်လား ”
It’s inter-governmental contract/treaty, notachild play.
လစ်ဗျားမှာ ကဒါဖီအစိုးရ ပြုတ်ကျသွားလို့ ရေနံကဏ္ဍမှာ တရုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့ ဒေါ်လာသန်းနှစ်ရာကျော် ပလုံတော့မယ်လို့ သတင်းများမှာ ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ကြီးက လူထုအုံကြွမှုကာလအတွင်းမှာကို လူသတ်သမားကဒါဖီအစိုးရကို လက်နက်တွေရောင်း၊ ကုလသမဂ္ဂမှာ အကာအကွယ်ပေးခဲ့လို့ နောင်တက်လာသူများက ဒဏ်ခတ်တာပါ။ အလျော့အတင်း ညှိနှိုင်းမှုတွေ ပြန်လုပ်လို့ရလည်း အရင်အစိုးရတုန်းကလို မျက်နှာသာပေး မခံရမှာ သေချာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း စာချုပ်ဆိုတိုင်း သဂျီးပြောသလို ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူး။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှာသေချာရင်၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေရှိရင်၊ ပွင့်လင်းမြင်သာ တာဝန်ခံမှု ကင်းမဲ့ရင်၊ လိမ်ညာဖုံးကွယ်မှုများ ရှိခဲ့ရင် နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာ တင်ပြလို့ရပါတယ်။ စာချုပ်ပါ လျော်ကြေးပေးဖို့ မလိုပါ။ ဥပမာ – ဒါးထောက်ပြီး လုပ်တဲ့အရောင်းအဝယ်စာချုပ်၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရလို့ အတင်းအကြပ် လက်ထပ်စာချုပ် မှာ လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရလည်း တရားမဝင်ပါ။
မောင်ရှုံးရေ သဂျီးက လမ်းဆုံးနေပါပြီ၊ သူမိုက်တိုင်း လိုက်မမိုက်၊ ပြောတိုင်း စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်ပါနဲ့လို့ ပြေချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ ထပ်စဉ်းစားမိတာက တော့ အခု “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” နဲ့ အစိုးရနဲ့ လက်တွဲအလုပ်လုပ်တော့ မဲ့ အလားအလာ ကိုလဲ တရုတ်အစိုးရက ထည့်စဉ်းစားပြီး ဖြစ်နေမှာမို့ သိပ်တော့ အခြေအနေ မဆိုးလောက်ဘူး မျှော်လင့် ရပါတယ်။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်” ရဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တွေ နဲ့ ဆက်ဆံရေးကို သူတို့ သိမှာပါ။
အရေးကြီးတာ က ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ ရိုးသားမှု နဲ့ ပညာရှိမှု ဘဲ လိုပါတယ်။
အရေးကြုံရင် တော့ ကျွန်မတို့ အားလုံး တစ်သွေးတစ်သားထဲ ဖြစ်ကြမယ် လို့ ယုံကြည်တာပါဘဲ။
မှန်တာပြောရရင် ပြည်သူလူထု အများစုကတော့ ဒါထက်ပို ဆင်းရဲစရာ မရှိပါဘူး။ ပိုကောင်းလာဖို့ဘဲရှိမှာပါ။
အစိုးရထဲမှာသာ အရည်အချင်းမရှိသူတွေ အာဏာဆက်ပြီးရူး မနေဖို့လိုမယ်။
ကြားလိုက်ရသမျှ စွမ်းအင်လို အပ်ချက်တွေကကြောက်စရာတွေပါလား။လောဘတွေလျှော့မှတော်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီမြစ်ဆုံ ဆည် တည်ဆောက်ရေး နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးတော့ အတော်များများက (သူများယောင်လို့လိုက်ယောင်) ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတာ တွေ့ ရပါတယ်။ အကျိုးနဲ့အပြစ် ဘယ်ဟာများမလဲဆိုတာမျိုးကိုပေါ့။ ဘာဖြစ်လို့ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ ဒီဆည်ကိုဆောက်သင့်သလား မဆောက်သင့်ဘူးလား (မြန်မာပြည်အတွက်) ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအပေါ်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား မပြောနိုင်ကြပဲ။ ဝေ့လည်ကြောင်ပါတ်တွေ ဖြစ်နေတာတွေ့ နေရလို့ ပါ။ စာများများ ဖတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်၊ ဗဟုသုတလည်း အထိုက်လျှောက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအပေါ်မှာတော့ Critical thinking ဟာ မရှိမဖြစ် (essential ) အနေနဲ့သိပ်ကို အရေးပါလာပါပြီ။ အင်တာနက် သုံးသူ အများစုကတော့ စာဖတ်အား မနည်းလောက်ဘူး ၊ အသိပညာ မနိမ့်ကျဘူးလို့(မြန်မာပြည်အတွက်) ယူဆလိုက်ပါတယ်။
ဆက်ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ …….. ၀န်ကြီး ဦးဇ်ာမင်း နဲ့ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ် ၀န်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူများ ၊ CPI က ပြောကြားထားတဲ့ စကားရပ်တွေနဲ့ 
Eleven Media Group / Banca ဥက္ကဌဦးထင်လှ ၊ တရုတ်ပညာရှင်များအပါအ၀င် ၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီး က ပညာရှင်များ က တညီတညွတ်တည်း ပြောကြားလိုက်တဲ့ စကားရပ်များကို
နှိုင်းယှဉ် ချိန်ထိုး သုံးသပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ အဖြေက တစ်ခုတည်း ထွက်လာပါတော့တယ်။
ဘာမှ ကို ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေစရာ မလိုအောင် ကို သူတို့တညီတညွတ်တည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာက ထွက်လာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စီးပွားရေးအရရော ၊ နိုင်ငံရေးအရရော ၊ စွမ်းအင် အရရော ဘယ်လိုမှ လုပ်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့။ ယခု မြန်မာနိုင်ငံကရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်ထက် နောင်အဆ ၁၀၀ ရရင်တောင်မှ စတေးစရာ အကြောင်းလုံးဝမရှိ။
နောက်မေးခွန်းကတော့ တဖက်စီဖြစ်နေတဲ့ အုပ်စု နှစ်ခု မှာ ဘယ်အုပ်စုက Professional ကျပါသလဲ၊
ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကို ဘယ်အုပ်စုက မေးခွန်းအထုတ်ခံ ရပါသလဲ။ ဒီအဖြေဟာလည်း အင်မတန်ကို ရှင်းလင်းစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက တရုတ် (အစိုးရ) နဲ့တရုတ်စီးပွားရေး ရဲ့ ပေါ်လစီ၊ ကျင့်ဝတ်၊ ဗျူဟာ၊ မျှတမှု
(ဒါတွေကိုတော့ စာဖတ်သူတွေ ကိုယ်တိုင် လေ့လာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမှာပါ)။
အပြစ်မပြောချင်တဲ့သူရှိသလို၊ အပြစ်လို့မြင်တဲ့သူလဲရှိမှာပါ။ ဒါတွေကတော့ သူတို့ ရဲ့စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေ၊ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်မှု၊ သဘောထား ခံယူချက်တွေ အပေါ်မှာ တည်မှီနေပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီတော့ ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေက မေးခွန်း ထပ်ထုတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုကျန်တဲ့ ဆည်တွေကိုရော ဘာလို့ ဒီလိုမျိုးတွေ မဖြစ်ကျသလဲဆိုပြီး။ ဟုတ်ကဲ့ ဒီလောက် အသိပညာ နိုးကြွမှုမရှိသေးတာ ၊ ဒီလောက် ဆိုးကျိုးမများလောက်မှာ၊ ဒီမြစ်ဆုံဆည် ကိုပဲ first priority အနေနဲ့ဖြစ်နေတာ ၊ အမိဧရာဝတီ နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပေါကြွယ်ဆုံး biodiversity ဖြစ်နေတာ ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက် ကောင်းကျိုးအင်မတန် နည်းမှာ ၊ ဒီစီမံကိန်းရဲ့ နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်တွေဟာ မရိုးသားမှုပေါင်းမြောက်များစွာ ပါနေတာ ၊ မြစ်ဆုံ တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းကို အကြောင်းပြပြီး နောက်ဆက်တွဲ သဘာဝ သယံဇာတတွေကို ပေါ်တင်ခိုးယူနေတာ အစရှိတဲ့ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ပဲဖြစ်ပါတယ် လို့မြင်မိပါတယ်။
အဆိုး ဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးက Collateral Damage ပါ။ ဘယ် ဆည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့မှ နှိုင်းလို့ မရအောင် ကြီးမားပါတယ်လို့သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပါယ်အသီးသီးက ပညာရှင်တွေ ထောက်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေတဲ့ လူတွေကို ကျွန်တော် ဒီနေရာက မေးခွန်း ထုတ်လိုက်ပါမယ်။
(ခင်ဗျားတို့တတွေ) ဘာကို ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေကျတာလဲ ။
အောက်မှာ.. ဗိုလ်မှုးအောင်လင်းထွဋ်စာ တင်ပေးထားပါတယ်.။ သတင်းအထောက်အကူရဖို့.. ရွာသားတွေ..တွေးနိုင်ကြဖို့အတွက်ပါ..။
ကြည့်ရတာ..အင်အားချိန်ခွင်လျှာညှိဖို့.. ယူအက်စ်နဲ့.. မြန်မြန်သွက်သွက်လေး… ချိတ်ဆက်ဖို့..လိုနေပြီထင်မိပါတယ်.။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သံတမန်ဆက်ဆံရေးကို.. အမေရိကပြည်ထောင်စုက.. သံအမတ်ကြီးအဆင့်မြှင့်ပေးဖို့.. တိုက်တွန်းသင့်တယ်ထင်မိတယ်..။
အရှိန်နဲ့..ဆက်လှိမ့်လိုက်ရင်.. မြန်မာတွေမကြုံဖူးအောင်ထူးတဲ့.. အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့..။
တရုတ်ပြည်သွားတောင်းပန်ရတဲ့.. ၈လုံးဒုသမ္မတလည်း သိပ်တော့မချောင်…။
စုစုပေါင်း… ၁၆လုံးဆို.. တရုတ်သမ္မတကြီး.. မခံနိုင်ပါဘူး..။
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ၏ကံကြမ္မာသည်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြ တ်ရေး အား သမ္မတဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်သော လက်ရှိအစိုးရအသစ် နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သောအတိုက်အခံလွှတ်တော်အတွင်း၊အပြင် ပုဂ္ဂိုလ်များအချိန်မှီ မဆောင်ရွက်နိုင်လျှင် မကြာသောကာလတွင် တရုပ်နိုင်ငံ၏ကိုလိုနီဖြစ်လာလိမ့်မည့် အရေးကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်လိုပါသည်။ နေပြည်တော် အခြေအမြစ်မှလာသော သတင်းများအရ ရက်ပိုင်းအတွင်းကဒုတိယသမ္မတသီဟသူရဦးတင်အောင်မြင်ဦးတရု ပ်နိုင်ငံသို့ လျှို့ဝှက်ခရီးထွက်ခွါသွားကြောင်း သိရပါသည်။ ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေ ကာတာကိစ္စအတွက် ဆွေးနွေးရန်သွားကြောင်း အတည်ပြုဆဲသတင်းများအရ သိရပါသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင် ကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝါရှင်တန်မြို့ သို့ရောက်ရှိနေပြီး သမ္မတအိမ်တော်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်သမ္မတ၏အထူးကိုယ်စား လှယ် DerickMitchell တို့နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နေပြီဖြစ်ပါသည်။
တရုပ်နိုင်ငံ သည် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ မလေးရှား၊ ဘရူနိုင်း တို့နှင့်ပြဿနာဖြစ်နေသော South China Sea အတွင်း Spratly ကျွန်းစုအရေးကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် မြန်မာနိုင်ငံ အား တရုပ်နိုင်ငံဘက်မှထောက်ခံရန် ရပ်တည်ပေးရန်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုဖိအားပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် တရုပ်နိုင်ငံ၏ တောင်းဆိုချက်ကို လက်ခံလိုစိတ်မရှိကြောင်း အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် သာလက်တွဲသွားလိုသည့်ဆန္ဒရှိသဖြင့် တရုပ်ခေါင်းဆောင်များမကြေမနပ် ဖြစ်နေကြပါသည်။ Spratly ကျွန်းစုအရေးကိစ္စ ဖြစ်နေသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်လည်း လက်ရှိအနေအထားအရ တရုပ်တို့ကို ရင်ဆိုင်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံ ထံမှ စစ်ရေးအကူညီရရေး ချဉ်းကပ်နေကြပါသည်။ သို့သော် မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်မူ တရုပ် နိုင်ငံအစိုးရကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် မဆန့်ကျင်ရဲသလို လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုများကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရ ကိုချဉ်းကပ်ရန် မဝံ့မရဲဖြစ်နေရသည့် အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါသည်။
ထို့အပြင် စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ၏ တစ်ဦးတည်းမှားယွင်းစွာဆုံးဖြတ်ခဲ့မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သည် တရုပ်အစိုးရ ၏ လက်ဝေခံဘဝရောက်ခဲ့ရပါသည်။ စာချုပ်ပေါင်းများစွာကို တရုပ်တို့အလိုကျ လက်မှတ်ထိုးရေးထိုးပေးခဲ့ရသဖြင့် လက်ရှိ သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် ချီတုတ်ခံထားရသည့် သဘောဖြစ်နေပါသည်။ တရုပ်တို့၏ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း သမ္မတဦးသိန်းစိန် အစိုးရသည် နယ်စပ်ဒေသရှိ ”ဝ“ နှင့် မိုင်းလား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ ကိုယခင်အခြေအနေများအတိုင်းနေထိုင်ခွင့်ပြုရန် သဘောတူညီခဲ့ရပါ သည်။ ယနေ့ မြန်မာတစ်မျိုးလုံး၏ အမျိုးသားရေးကိစ္စဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်ကယ်တင်ရေး သည် အစိုးရအာဏာပိုင်အများစုအပါဝင် တစ်မျိုးသားလုံး၏ တောင်းဆိုမှုကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့်ရေကာ တည်ဆောက်ရေးကိုရပ်တံ့ရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းသိရပါသည်။သို့ေ သ်ာတရုပ်အစိုးရ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပေဦးမည်။ ယခင်အစိုးရလက်ထက် တရုပ်တို့နှင့် သဘောတူလက်မှတ်ထိုးခဲ့သည့် ကိစ္စဖြစ်နေ၍ တရုပ်တို့၏သဘောထားကိုပြန်လည်မေးမြန်းဘို့လိုသလိုကုန် ကျသုံးစွဲပြီးငွေကြေးများ မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်မည် ဆိုသည်ကိုလည်းညှိနှိုင်းရပေဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သီဟသူရဦးတင်အောင်မြင်ဦး တရုပ်နိုင်ငံသို့ သွားနေရပါသည်။
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေ ကာတာ တည်ဆောက်မှု ကိစ္စ အတွက် မြန်မာပညာရှင်များ တရုပ်နိုင်ငံသိ့သွားရောက်စဉ် တရုပ်တာဝန်ရှိသူများမှ ရေကာတာတည်ဆောက်မှုကြောင့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်လာမည်ကိုသိရှိပြီး ဖြစ်သောလည်း ဘာကြောင့်လုပ်ရသလဲဆိုတော့”မင်းတို့အစိုးရကိုယ်တိုင်သဘောတူလို့ငါတို့လုပ်တာ၊မင်းတို့အစိုးရကိုမင်းတို့ အပြစ်တင်၊မင်းတို့အချင်းချင်းပြဿနာဖြစ်တာငါတို့နှင့် မဆိုင်ဘူး၊ငါတို့ကတော့အကျိုးအမြတ်ရှိရင် ဘာမဆို လုပ် မှာဘဲ” လို့ပြောလွှတ်လိုက်ကြောင်းသိရပါသည်။ အကယ်၍ တရုပ်အစိုးရက ဧရာဝတီမြစ်ဆုံရေ ကာတာ တည်ဆောက်မှု ရပ်စဲရေးကို သဘောမတူခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုလဲ စဉ်းစားထားဘို့လိုမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ပါ၍ ဧရာဝတီမြစ်ကယ်တင်ရေးအတွက် လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသော အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး အချိန်ဆွဲ မည်ဆိုပါက မြန်မာနိုင်ငံသည်မကြာမှီ တရုပ်တို့၏ရန်အန္တရယ် နှင့်ရင်ဆိုင်ရလာနိုင်ကြောင်းသုံးသပ် တင်ပြအပ် ပါသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လ ၂၉ ရက်
တရုတ်အန္တရာယ် ဆိုတဲ့စကားမှာ ကိုလိုနီအဖြစ်ရောက်သွားမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ် ကပိုမိုလွှမ်းမိုးလာကြသလို၊ နောက်နှစ်ရာစုတခုနှစ်ခုလောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ဟောင်ကောင် လိုရောက်သွားမလားဆိုတဲ့ ဟောကိန်းလိုလို ကိစ္စတွေ ရေးကြီးခွင်ကျယ်ဖြစ်လာပါတယ်။ မောင်မိုးညိုအနေနဲ့ကတော့ ဒိကိစ္စကဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
(၁) မြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်သောအခါကမှ တရုတ်နိုင်ငံ ရဲ့လက်အောက်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးပါဘူး။ (ကူဘလိုင်ခန် လက်ထက် အင်ပါယာချဲ့ထွင်ခဲ့တာဟာ သက်ဦးဆံပိုင်စံနစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ခုချိန် geopolitics နဲ့အကွာကြီးကွာတာကိုတွေ့ကိုသတိချပ်ပါ။)
(၂) တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိ အုပ်ချုပ်ပုံစနစ်ဟာ လက်ဆင့်ကမ်းပေးတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ခိုင်မြဲနေပြီမို့ အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတခုကို အုပ်ချုပ်ရေးအရသိမ်းသွင်းမယ်လို့မထင်ပါ။
(၃) စီးပွားရေးအရမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ (တောရောမြို့ပါမကျန်) စီးပွားရေးအဓိကချုတ်ကိုင်ကြသူတွေဟာ တရုတ်လူမျိုးများ နဲ့ ကုလားလူမျိုးအချိုကိုသာ အဆက်ဆက်တွေ့နေရတဲ့ သာဓကတွေကြောင့် ဒီလိုနည်းနဲ့ဘဲ တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုက ဆက်လက်စခန်းသွားဘို့ရှိပါတယ်။
(၄) တရုတ်က အရှေ့တောင်အာရှ တနိုင်ငံငံကို သိမ်းပြီဘဲထားပါတော့၊ ဂျပန်နဲ့ အနောက်အပါအ၀င် အမေရိကားက လက်ရှောင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါကိုတရုတ်ကလုံးဝမလိုလားပါဘူး။
(၁၉၇၀) တရုတ်ပြည်ခေါင်းဆောင်သစ် တိန်ဇျောက်ဖိန် လက်ထက်မှာကမ္ဘာကိုတံခါးဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့အတူ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံမှာ ဒေါဟာရအသစ်တခု ခေတ်စားလာပါတယ်။ ဗိုလ်ကျစိုးေ၇းဝါဒ လို့ခေါ်တဲ့ HEGEMONISM ပါ။ ဒီဝါဒကိုလက်ကိုင်ပြုပြီး သူ့အပေါ် လွှမ်းမိုးလာမဲ့ အရိပ်အရောင်ဟူသမျှကို အဲ့ဒီ ဒိုင်းနဲ့ ကာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့- ဘာကအရေးကြီးသလဲ။ တရုတ်တွေ စီးပွားရေး အဓိကသော့ချက်နေရာတွေ ကိုပိုမိုချဲ့ထွင် လွှမ်းမိုးလာတာမျိုးက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ တည်ဆဲမြန်မာစီးပွားရေးလောကမှာ တရုတ်များသာ နေရာအကျယူထားတာ ကမငြင်းနိုင်တဲ့ သာဓကတခုပါ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အဆက်ဆက်သော ဗိုလ်ချုပ်များ အခြားတိုင်းရင်းသားမြန်မာတွေနဲ့ ဆက်ဆံစီးပွားရေးလုပ်ရတာထက်စာရင် တရုတ်နဲ့လုပ်ရတာက ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ခဲ့လို့ပါ။
(န၀တခေတ်) မှာ ဗမာစကားကို ခတောင်းကျိုက်ပြောရတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအမည်ခံ ဥိးပေါက်ယူချန်း တို့ နောက် Steven Law တို့လို သူတွေက ဗိုလ်ချုပ်များအိမ် တံခါးမရှိဒါးမရှိဖြစ်လာတဲ့ အပြင်၊ လေိာစစ်ဟန်လို CIA ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ထားသူတွေ က၇န်ကုန်၊ မန္တလေး မြိုးပေါ်မှာ ခတ်တည်တည် ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ဘဲ သွားနိုင်လာနိုင်အရေးပါအရာေ၇ာက်တာတွေကိုကြည့်ပါ။ ခုလွှတ်တော်မှာ STEVEN LAW လိုလူကို လွှတ်တော်အမတ် ပေးမထားတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ သူကရထားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစီ့းပွားရေးလုပ်ကွက်တွေကိုဘဲကြည့်ကြပါ။
(၁) တရုတ်တွေက အာမချောင်ပါဘူး။ သိုသိုသိပ်သိပ်စီးပွားလုပ်တတ်ပါတယ်။ (၁၉၇၀)၀န်းကျင်လောက်က တရုတ်ဗမာအရေးအခင်းမှာ ၇န်ကုန်လိုတိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲက လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုဆန္ဒပြကြသူတွေကလမ်းမပေါ် မီးပုံရှိုးခဲ့ကြတာကိုသတိရကြပါ။
(၂) ပေးစရာရှိရင် လက်မတွန့်တမ်း ဖေါဖေါသီသီ ပေးတတ်ပါတယ်။ ထောင်မြင်တော့ရာစွန့်ပေါ့။
အချုပ်ဆိုရရင်- တရုတ်လိုရှာ၊ ကုလားလိုစု၊ ဗမာလိုမဖြုံးနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားက အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ စကားမဟုတ်ကြောင်းပါ။
small catပြောထားသလိုပါဘဲ။ဘာလုပ်ကြမလဲ အနုမြူစက်ရုံဆောက်ကြမလား ကျနော်တို့နိုင်ငံစွမ်းအင်လိုတယ်။ ဒါအဓိကအချက်ပါဘဲ၊ စကားလုံးတွေအပေါ်ကပ်ပြီးမငြင်းချင်ပါ ။အချိန်မဟုတ်တော့ပါ။ တတ်သိပညာရှင်တွေကနိုင်ငံ့စီပွားရေး၊ငွေကြေး၊ သဘာဝသယံဇာတ ၊ဂေဟာစနစ်တွေအရစွမ်းအင်ရဖို့ဘာလုပ်သင့်လဲ၊ အနည်းဆုံးတော့အကြံပေးသင့်တယ်။ တင်ထားတာတစ်ခု.. .မြန်မာနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအားအတွက် ဘာရေကာတာမှဆောက်စရာမလိုတဲ့လျှပ်စစ်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အငြိမ်စား) တစ်ဦးပြောတာတဲ့.. ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာတော့မပါပါ။. ဒါမျီုးတွေရပ်ပြီးဝေဖန်ေ၇းတွေရပ်ပြီး၊အကြံပြုချက်လေးတွေလဲဖတ်ချင်ပါပြီ။
Don’t တွေပြိးရင် Do တွေလာသင့်တာပေါ့။ အကြံပြုချက်များတင်ကြပါဗျို့။
Nuclear Energy is more expensive than Hydro or Coal generated Electricity.
တရုတ်နဲ့ ခွာပြဲတာ”ပြ”လေ.. အနောက်နိုင်ငံတွေဖက်က.. စီးပွားရေးနဲ့ ရင်းနှီးမြုတ်နှံဖို့.. စိတ်ဝင်စားလေဖြစ်မှာပါ…။
ဒါကို.. ဟန်ချက်ညီညီ…ပါးပါးနပ်နပ် လုပ်တတ်သွားဖို့လိုမယ်ထင်မိတယ်..။
ဟန်ချက်ညီညီ…ပါးပါးနပ်နပ် ဆိုတာမှာ. တရုတ်နဲ့မြန်မာဟာ..အိမ်နီးချင်းဖြစ်လို့.. (မြန်မာမြေပုံကို.. ကပ်ကျေးနဲ့ကိုက်ဖြတ်ပြီး.. ဥရောပတိုက်နားသွားထားမရလို့). တရုတ်ကို ကန်ထုတ်လို့မရပါဘူး..။
ဗကပခေတ်တွေနဲ့.. တရုတ်ဖြူခေတ်တွေ မှီသူတွေ.. ဒါကိုပိုသိမှာပါ..။
မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်မထားပဲ.. တိုင်းပြည်ကိုကောင်းစေချင်တဲ့.. စေတနာနဲ့.. ဆက်လုပ်ကြဖို့ပါပဲ..။
မြန်မာပြည်လက်ရှိအခြေအနေအရ.. ဘီလီယန်ချီပရောဂျက်တွေလုပ်ဖို့.. ငွေအရင်းအနှီးမရှိပါဘူး..။
အနုမြူစွမ်းအင်စက်ရုံဟာ.. ငွေတင်မက… နည်းပညာပါအကြီးအကျယ်လိုတဲ့အပြင်.. ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံထက်.. လူထုကို အန္တရာယ်တွင်းထဲ.. ဆွဲချဖို့ အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ဒါပေမဲ့.. ရဲလိုးကိတ်ထွက်တဲ့မြန်မာပြည်ဟာ.. ယူအက်စ်အကူအညီရရင်..
ကျွန်တော့်အမြင်မှာတော့ US အကူအညီ လိုကိုလိုတယ်ထင်တာပဲ
ညူစွမ်းအင် စက်ရုံတော့ ပိုင်သင့်တယ်ထင်တယ်.. ဒါမှ တိုင်းပြည်မှာ နေရာပေါင်းစုံ အသုံးချနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေလဲကျန်မယ်၊ တရုတ်ရဲ့ ခေတ်သစ်ကိုလိုနီပြုမှုရန်ကနေလဲ ကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်တယ်.. ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကတော့ အဝေးကြီးက အကူအညီကို ယူတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်.. အဓိက ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတွေ မြင့်တက်လာအောင်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးပွားလာအောင် တရားအားထုတ်နေရုံနဲ့တော့ ဖြစ်လာစရာမမြင်မိပါကြောင်းနှင့် US ကလဲ မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်ရေး၊ နိုင်ငံရေးအရ အချက်အချာကျနေတော့ အာသာငမ်းငမ်းနဲ့ လိုချင်နေတယ်လို့ မြင်မိပါကြောင်း..
Nuclear Energy is more expensive than Hydro or Coal generated Electricity .Everybody knows that,Now Hydro power has delay we need suggestions how to get Electricity.Everybody must agree what to use. What Plan would be next ?Will we sit down doing nothing.
Source From – http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/news/7476-2011-10-03-12-02-06
If it is true saying like that, it will be digging their own grave.
ဤအတောအတွင်း မြစ်ဆုံဒေသ စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ခဲ့သော တရုတ် China Power Investment (CPI) ကုမ္ပဏီက ပြီးခဲ့သည့်ရက်ပိုင်းအတွင်း အစီရင်စာတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ထိုအစီရင်ခံစာတွင် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှု နည်းပါးကြောင်း၊ ဒေသစီးပွား တိုးတက်လာမည်ဖြစ်၍ စီမံကိန်းကို ဒေသခံ ကချင် လူထု ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ထောက်ခံကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
Those Myanmar Fonts didn’t appear on the comment box.
Let’s see this time.
အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေမဆိုထားနဲ့ .. တော်တော်ဝေးတဲ့ နိုင်ငံတွေကပါ တရုတ်ကို လန့်နေကြပါတယ် ..
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ မဆိုထားနဲ့ .. ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေပါ တရုတ်ကို လန့်နေကြပါတယ် …
အင်းအားသေးနိုင်ငံ မဆိုထားနဲ့ .. အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကပါ တရုတ်ကိုလန့်နေကြပါတယ် ..
ဘာကြောင့်လဲ .. အဖြေရှာ ကြရမှာပါ …
အဓိက သော့ချက်က ဘာလဲ .. ၀ိုင်းစဉ်စားကြပါ ..
ဥယျာဉ်မှူးတစ်ယောက်ဟာ အသီးလိုချင်ရင် …
မျိုးစေ့ကောင်း ရှာရမယ် ..
ကိုက်ညီတဲ့ ဥတုရွေးတတ်ရမယ် ..
ပြုစု ပျိုးထောင်တတ်ရမယ် ..
ခူးဆွတ် တတ်ရမယ် ..စသဖြင့်
သူ့ကတော့ လုပ်ခွင့်ရှိအောင် လုပ်မယ် ..
လုပ်ခွင့်ရရင် လုပ်မယ် .. ဖြစ်ထွန်းအောင်လုပ်မယ် ..
ဒါသူ့ အရည်အချင်းပါပဲ .. သူလုပ်နေမှာပဲ …
သူ့အရည်အချင်းမျိုးကို တို့မှာလဲ သူသူငှာငှာ ရှိစေချင်ပါတယ် .. အားလုံးကိုပါ ..
သူစိုက်လို့ ရလာတဲ့ အသီးဟာ သူ့အကျိုးအတွက်ပါ ..
ကိုယ်စိုက်နိုင်မှ ကိုယ်ရကြမှာပါ ..အားလုံး ညီညီညွှတ်ညွှတ်နဲ့ ကိုယ်ဖါသာ စိုက်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမှာပါ .. ဘယ်နိုင်ငံကမှ သူတို့ အကျိုးတွေမပါပဲ မကူညီကြပါဘူး ..
ဒါမို့ အလွှာအသီးသီး တာဝန်ကိုယ်စီ အလုပ်လုပ်ချိန်တန်ပါပြီ ။
တာဝန်ယူချိန် တန်ပါပြီ ။ ညီညွှတ်ဖို့ရာ တန်ပါပြီ ။
yes. nuclear energy is costlier than hydro-based energy but better for the long term. It is not the fact that the production of such energy is hazardous to the natives and has negative impact on its environment: wide range of nuclear products and byproducts which can be used in warfare, agriculture and manufacturing, etc. It is important that such privilege does not land in the wrong hands. That is the leading cause that stop any 3rd country in acquiring nuclear energy. China has been acquiring nuclear energy for more thanadecade given the fact that it is worth for the long term. But Burma is still behind in many areas and it is still out of future horizon. No single nation in Asean has any capability to start nuclear energy production.
Look at the living standard of our people: international water and sanitation decade (1990-2000) has passed but many villages still don’t have clean and safe water supply. Most part of the countryside still rely on pit-latrine.
It is due to deeply flawed political infrastructure and socio-economic system.
ပြည်သူတွေအကျိုးရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုအကျိုးရှိမယ်ဆိုတာ အရင်နားလည်အောင်ရှင်းပြလေ…ဓာတ်အားထုတ်ပြီးရင် သူများနိုင်ငံရောင်းစား..ထားလိုက်ဦး…ရောင်းလိုက်လို့ရမယ့် ပိုက်ပိုက်တွေကို ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်နေရာမှာပြန်သုံးပေးမှာလဲ…plz…ကျေးဇူးပြုရ်ျ ဖြေကြပါ….ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အလှအပကို ဖျက်ဆီးတော့မှာလား…ဖျက်ဆီးခကရော ထိုက်တန်မှာလား…ခုကို ဧရာဝတီမြစ်ကြီးက တိမ်ကောနေပါပြီ…ဧရာဝတီကို မှီခိုလုပ်ကိုင်စားသောက်နေရတဲ့ လူတွေ ဘုရားတနေကြပါပြီ..တံငါလုပ်သားတွေ..အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုလည်း ငဲ့ကွက်ကြပါဦး…ဒီစီမံကိန်းကို ဆက်လုပ်ရင် သူတို့အတွက် ဘာတွေပြန်အစားထိုးပေးမှာလဲ…အားလုံးကိုခြုံစဉ်းစားရင် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းမှာကို ပိုသဘောကြမိပါတယ်….
နိင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုလက်ခံမှုကိုယူမယ်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံမျိုးတွေဆီက၊ဘယ်လို company မျိုးတွေဆီက
ဗီယက်နမ် ကိုကြည့်ပါ။ုအချိန်တိုအတွင်းပါပဲ။
တရုတ်တောင် ဘယ်နိုင်ငံမျိုးက၊ဘယ် company တွေလာရင်းနှီးအောင်လုပ်လို့ စပြီး ထောင်တက်သွားတာလဲ???